Isitolo esidayisa yonke impahla PP PE PVC odongeni olulodwa lukathayela ipayipi extrusion umugqa Umkhiqizi kanye Umthengisi | Qiangsheng
PP PE PVC odongeni olulodwa lukathayela ipayipi extrusion umugqa
I-Single Wall lukathayela Pipe Machine ingasetshenziswa ukukhiqiza amapayipi lukathayela PE, PP, EVA, PVC, PA ngokuqhubekayo. Amapayipi lukathayela wepulasitiki olulodwa anezici zokumelana nokushisa okuphezulu, ukumelana nokugqwala, ukuqina okukhulu nokuguquguquka okuhle, njll. Zisetshenziswa kabanzi emikhakheni ye-auto wire harness, amapayipi kagesi adlulisa intambo, isekethe lwethuluzi lomshini, ukuvikela amalambu nezintambo zezibani, amashubhu we-air conditioner nomshini wokuwasha njll.
Amapayipi lukathayela owodwa odonsa ngamapulangwe anezici zokumelana nokushisa okuphezulu, ukugqwala kanye nokuqina kwemihuzuko, umfutho ophakeme nokuzivumelanisa nezimo okuhle, njll zisetshenziswa kakhulu emikhakheni ye-auto wire harness, amapayipi kagesi odlulisa izintambo, isekethe lwethuluzi lomshini, amapayipi wokuvikela we amalambu nezintambo zezibani, amashubhu e-air conditioner nomshini wokuwasha, njll. Izicelo: ipulasitiki elilodwa lodonga lukathayela elenza umshini lingakhiqiza amapayipi kagesi adlulisa intambo, isekethe lwethuluzi lomshini, ipayipi lokuvikela lamalambu, amapayipi amanzi ku-conditioner, umshini wokuwasha, indlu yangasese, njll.
I-1.Extruder: isikulufa esisebenza kahle kakhulu, u-gearbox ongaphezulu wegear onzima, ukufudumeza okokugqoka okungavuthiwe, i-plasticization enhle, isivinini esikhulu se-extrusion.
Umshini wokwenza i-2.Corrugation: isakhiwo esivaliwe, isixhumanisi semodyuli kusisekelo sokuvalwa jikelele senza uhambo olujikelezayo olusebenza kumigudu esebenzayo.
Amamojula we-3.Forming: yenziwa ngensimbi eqinile, eyenziwe ngokusetshenziswa okunzima kwezinto zokuqeda ze-CNC ezikhiqizelwe ukuqinisekisa ubulukhuni nokunemba kwamamojula wokubumba. Lawa mamojula kulula futhi kulula ukuwashintsha
4.Coiler: isikhundla Single noma isikhundla kabili nge torque motor.
Izingxenye 5.Electrical: ABB inverter, Schneider contactor, RKC thermo controllers njll
Lukathayela Pipe Ububanzi
Imodeli Yomshini Oyinhloko
6-10 m / iminithi
8-12 m / iminithi
Langaphambilini Umugqa wepayipi we-PPR extrusion
Olandelayo: Umugqa wokukhiqizwa kwepayipi we-PVC oqinisiwe